ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि निर्घात कुटपिट हुँदा योगेश भट्टराई किन बोलेनन् ? « रिपोर्टर्स नेपाल
ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि निर्घात कुटपिट हुँदा योगेश भट्टराई किन बोलेनन् ?
प्रकाशित मिति : 2019 September 28, 10:28 pm
काठमाडौं, ११ असोज । सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि आज चितवनमा निर्घात कुटपिट भएको छ । नेकपाका कार्यकर्ताहरुले उनीमाथि सांघातिक हमला गरेको आरोप लागेको छ । नेकपाका कार्यकर्ताले नै शाहीमाथि हातपात गरेको हो कि होईनन् भन्ने कुरा पुष्टि भएको छैन् । तर, चितवन प्रहरीले शाहीमाथिको कुटपिटमा संलग्नताको आशंकामा एक जनालाई पक्रउा गरेको छ ।
शाहीमाथि सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्ताले नै हातपात गर्नुको कारण के होला ? भनेर प्रश्न गर्ने हो भने नेकपाका स्थायी समिति सदस्य तथा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई र शाहीबीच हालै नेपालगञ्ज विमानस्थलमा विवाद भएको थियो । मन्त्री भट्टराईमाथि शाहीले अपशब्द बोलेको र अपमान गरेको नेकपाका भातृ संगठनका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । कतिसम्म भने शाहीमाथि युवा संघले त विभिन्न जिल्लामा प्रवेश निषेध अर्थात प्रतिबन्धसमेत लगाएको थियो ।
आज शाहीमाथि भरतपुरको चौविसकोठीमा नेपालका लागि नेपाली अभियानले आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम बिथोलिएपछि आफू बसेको होटलबाट बाहिरिने क्रममा दिउँसो आक्रमण भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारीअनुसार भरतपुरको होटल ग्लोवलबाट बाहिरिने क्रममा बा३ख ८४५८ नंको माइक्रोबसमा आक्रमण भएको हो । युवा समूहले ढुङ्गा, रड, लाठी प्रहार गरी माइक्रोबसभित्र रहेका शाहीसहितको समूहमाथि आक्रमण गरेको हो ।
यो प्रकरणमा मन्त्री भट्टराईले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । उनी यतिवेला विदेशमा छन् । तर, उनको फेशबुक पेज अहिलेपनि सक्रिय छ । उनले तीन घण्टा अघिमात्रै पनि उनले विभिन्न पोष्ट गरेका छन् । तर, शाहीमाथि भएको कुटपिटको बारेमा उनले अहिलेसम्म एक शब्दपनि बोलेका छैनन् । बरु, कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले शाहीमाथिको हमलालाई कायरताको संज्ञा दिएका छन् ।
प्रहरी उपरीक्षक दानबहादुर मल्लका अनुसार घाइते शाही चितवन मेडिकल कलेजको उपचारपछि काठमाडौँ ल्याईएको छ । तर, शाहीको अवस्था खतरामुक्त रहेको मल्लले जानकारी दिएका छन् । शाहीले काठमाडौँको अस्पतालमा उपचार गर्न चाहेकोले नै उनलाई यहाँ ल्याईएको बताइएको छ । उनको खुट्टामा चोट लागेको छ भने टाउको र शरीरमा समस्या छ । आक्रमणमा घाइते भएका अन्य दुईको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताए ।
प्रहरी उपरीक्षक मल्लका अनुसार सो क्रममा आक्रमण गर्ने एक जनालाई पक्राउ गरिएको छ । शाहीमाथि आक्रमण भएको खबर पाउनासाथ उद्धार गरिएको प्रहरी उपरीक्षक मल्लको भनाइ छ । त्यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० निकट युवाहरुले चौविसकोठीमा शाहीले सम्बोधन गर्ने गरी गर्न लागिएको कार्यक्रम बिथोलेका थिए । झडप हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले पनि कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेको प्रहरी उपरीक्षक मल्लले बताए ।